“मलाई कोरोना लाग्नासाथ नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पतालका निर्देशक डा. प्रदीप केसीलाई फोन गरेर आयुर्वेदिक औषधि मगाए । आयुर्वेदिक औषधि नियमित प्रयोग गरेपछि मलाई गाह्रो भएन, सजिलै कोरोना परास्त गर्नसकेँ,” डा. श्रेष्ठले भने । उनकी बहिनीलाई भदौ महिनामा कोरोना सङ्क्रमण हुँदा आयुर्वेदिक औषधिले निको भएको डा. श्रेष्ठको अनुभव छ ।
“म एलोपेथिक चिकित्सक हुँ तर कोरोनाकालमा आयुर्वेदिक औषधि धेरै सङ्क्रमितलाई वरदान हुन पुगेको छ । कतिले विश्वास गर्छन्, कतिले गर्दैनन् । मेरो लागि आयुर्वेदिक औषधिले धेरै सुधार गर्यो । म अरूलाई पनि आयुर्वेदिक औषधि प्रयोगका लागि भन्ने गर्छु,” डा. श्रेष्ठले भने । उनीजस्ता धेरै एलोपेथिक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले समेत कोरोनाको औषधिका रूपमा आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईंले आफूले पनि आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गरिरहेको भन्दै अरूलाई प्रयोग गर्न सुझाव दिए । आयुर्वेदिक औषधिले आफूलाई धेरै राम्रो गरेको जानकारी दिँदै उनले उक्त औषधि प्रयोग गर्न अरू सङ्क्रमितलाई पनि सुझाव दिए ।
त्यसो त नरदेवी आयुर्वेदिक चिकित्सालयबाट हालसम्म ७० हजार व्यक्तिले कोरोना उपचारका लागि औषधि लगिसकेका छन् । “हाम्रो तथ्याङ्कमा ६० हजार जनाले औषधि लगेका छन्, यो तथ्याङ्कबाहेक २० हजार जनाले आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गरेका छन्,” नरदेवी आयुर्वेदिक चिकित्सालयका निर्देशक डा. प्रदीप केसीले भने । चिकित्सक, नर्स, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, नेता सबैले कोरोना उपचारका लागि आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गरेको डा. केसीले स्पष्ट पारे ।
नरदेवीमा नै उत्पादन गरेको ज्येष्ठवासादी मिश्रण औषधि कोरोना निको बनाउन सहयोगी भएको निर्देशक डा. केसीले दाबी गरे । कोरोना कोषबाट अस्पताललाई प्राप्त एक करोड रुपियाँबाट उक्त औषधि निःशुल्क वितरण गरिएको थियो । डा. केसीका अनुसार एक केजी आयुर्वेदिक औषधि बनाउन अस्पतालले एक हजार तीन सय रुपियाँ खर्च गरेको थियो । यस्ता औषधि एक सय वर्षभन्दा अघिदेखि नै बनाउने र प्रयोग गर्ने गरेको चर्चा गर्दै डा. केसीले भने, “यसको प्रभावकारिता त्यो बेलादेखि नै राम्रो थियो ।”
आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यायले कोरोना उपाचारमा आयुर्वेदको महत्व धेरै रहेको बताए । उनले भने, “कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद उपचार केन्द्रमा दुई हजारभन्दा बढी सङ्क्रमितको उपचार भएको छ । ती सबैले आयुर्वेदलाई विश्वास गरिरहेका छन् ।” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सरोज ढुङ्गेलले लेखेका छन् ।